Arabo tovovavy manana ny fitsipiky ny andraikitra sy ny fiarahana amin’ny olona ivelan’ny ny hazakazaka. Mino aho fa ianao tsy maintsy ho tena amim-panajana momba ny. Izany dia miankina amin’ny ny Arabo girl ny fototra, fanabeazana sy ny fanabeazana.
Fotsiny ianao dia afaka ny ho fototry ny valiny momba ny fivavahana. Mino aho fa ianao tsy maintsy ho tena amim-panajana momba ny zavatra inoany sy mety tsy maintsy miresaka amin’ny ray aman-dreniny noho ny fahazoan-dalana, ny fahafantarana fa fifandraisana izany dia hivadika ho tena lehibe iray tsara lavitra. fototra, fanabeazana sy ny fampianarana.
Sarotra ny generalize
Fotsiny ianao dia afaka ny ho fototry ny valin-ny fitsarana an-tendrony ara-kolontsaina nomena tamin’ny alalan’ny haino aman-jery. Ahoana no daty ny ankizivavy. Izaho dia fito amby roa-polo taona aho, dia matahotra na dia ny miresaka tovovavy ihany koa. Ahoana no ahafahako manatsara ny tenako? (izany fotsiny aho dia efa nitondra ny toy izany dia toy izany koa, izany dia tsy misy dikany ny mino anao dia ‘ho’ na ‘hanova’ izany olona izany ao an-tsaina momba ny fitiavana anao. Satria fantany ianao Fa. Izy tia ny haino aman-jery fantatro. Izy mikarakara haino aman-jery midika izany izy dia vao natahotra ny fanehoana ny ao anatiny’ dia tena tsy manan-tsiny aho fantatrao ny ankizivavy izay efa lavo madly-pitia. izy dia tsy tao am-pianarana, noho izany dia tsy mahazo miresaka be. Izaho no tena saro-kenatra ny ankizivavy sy ny tsy f Tanteraka io valo taratasy teny ankizilahy tia azy ny ankizivavy mampiasa azy io ny ray aman-dreny mankahala mampiasa azy io ny ankizivavy ny ankizilahy dia tia azy ny ray aman-dreny mankahala azy valiny mampiasa azy io ny ankizivavy ny ankizilahy toy I. izaho no tia ankizivavy iray, tsy fantatro ny momba ny hafa noho ny anarany, ny fomba hahatonga azy ho raiki-pitia amin’ny ahy. ary izaho tsy hiresaka aminy tsy indray mandeha azfd. azy na tsy ary ho azy mijery ny u amin’ny alalan’ny ru hiatrika ru samy hafa toetra u tokony mahaliana azy ary ny fikarakarana ny momba azy, ka jereo izay izy ny Fomba mba hifanaraka amin’ny tontolo Arabo-boaty. ny modely dia Arabo-boaty. Afaka mahita eo amin’ny efijery fantsona miova nefa ny fantsom-pahitalavitra tsy mahazo ny mponina sy tsy misy kilema ianao. Fa tsy maintsy hiresaka momba ny olana avy hatrany. Aoka ny manapa-kevitra izay eo anivonareo izy fa tsy te ho amin’ny. Na inona na inona ny fanapahan-kevitra dia mety ho, hitombo sy hanaiky azy. Eny, manana olana amin’ny koa. Ny torohevitra tsara indrindra ho anao dia miezaka ny manao resaka, na ny lavitra akaiky azy na ny zavatra. Izany lalana izany dia resaka nanomboka. anao koa sy izay rehetra tokony atao dia ny miantso azy ho aiza ianao ary avy eo dia afaka practicelike inona ianao efa samy niteny tsirairay. Hi. Mety ho nisy fisalasalana kely noho ny ray. Miezaha miresaka aminy manokana ary raha toa ka mahatsapa ho toy izany koa ho tsapanao ho azy. Amin’ny roa taona indray, dia tiako ny ankizivavy. Dia an’i avy amin’ny mpifikitra amin’ny nentin-drazana fianakaviana. Avy farany enim-bolana izy dia mandray fomba fijery fa tiako ny avy amin’ny maro ny f. Aho manodidina io zazavavy izay tsy mbola nihaona taminareo hatramin’izay. Fa izy dia mihomehy be dia be ny zavatra izay efa nanao hoe, ary izy nanohina ny sandriko fotoana vitsivitsy. Izy no miezaka hampiseho ahy izy fa tia ahy, na dia vao ny touchy feely karazana? Mba te-ho afaka hiresaka amin’ny ankizivavy fa hahazo liana tao amiko izany ho maimaim-poana, fa amin’izao fotoana izao dia te-ahy ny vola, misy olona miezaka miresaka. Izy dia niresaka ary nihomehy amin’ny zazavavy hafa fa niova ny endriny rehefa niditra tao amin’ny efitrano fa miresaka ahy malalaka amin’ny finday sy izao ankehitriny izao ho an’ny anatin’ny efatra andro farany, dia nandefa ahy tsy ahy, fa heveriko fa tsy dia mety tsy ho tahaka ahy satria iray, na oviana na oviana izy mijery ahy izy, dia niresaka tamiko indray mandeha ihany, ary izy angamba dia afaka akory na dia ny daty. Efa io hanorotoro amin’ny Arabo ity tovovavy nahatsapa ho toy izy no tia ahy foana izy nampiasaina mba haka ny tanana izahay, fa milalao ny ady, nefa aho ka natahotra hanontany azy avy, fa. Efa io hanorotoro amin’ny Arabo ity tovovavy nahatsapa ho toy izy no tia ahy foana izy nampiasaina mba haka ny tanana izahay, fa milalao ny ady, nefa aho ka natahotra hanontany azy aho nefa rehefa nony farany ny baolina hanao izany izy, dia namely ahy ianao tena tia ahy. Tiako ianao fa tsy toy izany ho toy ny namana aho vaky fo, fa izay no tsapako toy izany ny Arabo zazavavy tia ahy dia nampiasa ny hilalao ady ary dia foana mampiasa ny hihazona ny tanany ary aho ka natahotra hanontany azy avy saingy rehefa farany di. Nahatsapa ho toy izany Arabo zazavavy tia ahy dia nampiasa ny hilalao ady ary dia foana mampiasa ny hihazona ny tanany ary aho ka natahotra hanontany azy avy, fa raha izaho ihany no izy, dia namely ahy amin’ny tena. Tiako ianao fa tsy mba tahaka izay heveriko fa ny Arabo tahaka ny daty ry zalahy ao aminy ny fikambanam-tiako ity Arabo sy zazavavy izy foana no nampiasaina mba haka ny tanana sy nampiasa ny hilalao ady, nefa aho ka natahotra hanontany azy avy ary raha izaho no izy, dia namely ahy w. Tiako izany Arabo sy zazavavy izy foana no nampiasaina mba haka ny tanana sy nampiasa ny hilalao ady nefa aho ka natahotra hanontany azy ka rehefa hitako izy namely ahy tiako ianao fa tsy mba toy izany, ary mbola mandra-ity andro isika mbola namana izy ary mbola mihazona ny tanako ihany na dia tsy toy ny ahy ny Antony no tiako foana ny manana ny nofinofiny momba ny taloha, na dia mahazo indray miaraka, dia mianjera ao tia ahy indray izy, dia maty, Dia nikapoka ny zazavavy izy mamitaka ahy. Mila ny fanampianareo izahay. Mba hanampiana antsika hanatsara ny votoaty amin’ny alalan’ny fanesorana ireo fanontaniana izay dia zava-dehibe toy izany koa sy ny nampitambatra azy ho any io fanontaniana io. Masìna ianao, lazao aminay izay fanontaniana eto ambany dia mitovy toy ity iray ity: Avy ny roa taona indray, dia tiako ny ankizivavy. Dia an’i avy amin’ny mpifikitra amin’ny nentin-drazana fianakaviana. Avy farany enim-bolana izy dia mandray fomba fijery fa tiako ny avy amin’ny maro ny f. Ny vadiko dia tia vehivavy iray hafa, ary tiako koa izy, ary te-hahazo azy hiverina amiko izy ary ny fomba ahafahako manao izany, mba hanampy ahy. Ireto fanontaniana manaraka ireto efa natambatra ho ity iray ity. Raha toa ianao mahatsiaro ho valin ireo fanontaniana ireo efa tafiditra ao fahadisoana manampy antsika hanatsara ny votoaty amin’ny niantsoany an’ireo fanontaniana ireo ho samy hafa ny fifanakalozan-kevitra. Azafady unmerge misy fanontaniana fa tsy toy ity iray ity: Daniel dia iray amin’ny chat mpandrindra amin’ny Hanontany Ahy ny Fifadian-kanina. Daniel mifanaraka ny fangatahana miaraka amin’ny vondrom-piarahamonina an-tserasera ny manam-pahaizana. I Daniel dia tratra ‘Gold’ ny haavon’ny toerana, ny avo indrindra ankapobeny izay azo atao. I Daniel dia manana feedback tsara note
Mianara mamaky ny teny arabo ho an'ny ankizy →